I-Camouflage yangaphandle engaphandle ye-WASTROFT ye-20L CB007-20 | Zone
Ibhegi ye-camouflage yomkhosi
Emkhosini okanye ngokwezifiso
44 * 31 * I-35cm
Intsebenzo yokupholisa i-1&iziselo zipholile ixesha elide. Umaleko wangaphandle unemigangatho yobungqina bamanzi ethi iqinisekisile ukuba akukho funga, umaleko ophakathi ngu-fight offint umxokelelwane kwaye i-Inter ifakwe ngokupheleleyo kwimibandela yokuvuselela
Iinkcukacha ze-2.Suplecctialct: IBakala Lemkhosi iBala lezezixhobo, ixhaphakile kwaye inxibe imisebenzi yangaphandle yokwanda. Intambo ye-elaistion ye-elaistion inokusetyenziselwa amacala amabini anezitshixo , i-wallet, okanye iselfowuni. I-teet yentsimbi ye-shoil ye-shoil ifakwe i-zipper ye-zipper ilula kwiminwe kwaye yakhiwe i-zulc ye-zungud ye-Haul.2 ye-I-IPRECR ye-Haul.2 kwaye i-Soubper ye-Outd, kunye neNcwadi yomsebenzisi.
I-3.100% yeLeakproof& Ukunganyangeki kwempembelelo: Ucolile opholileyo abonisa iqokobhe elinamanzi kunye neqokobhe elinzima ukuba unganyangeki kwiifrayini kunye nee-UV. Ubume obuqhelekileyo be-oval bukukuthintela ukuba ukrwitshwe. I-D-Buckle ingasetyenziselwa ukuxhoma isitshixo, iribbon
I-4.Tree Iindlela zokuphatha: Izixhobo ezinemitya ekhuselweyo yamagxa kunye namacala amabini agubungela imitya. Ungayikhetha ngemingxunya yamagxa e-padding okanye ubambe icala lezihloko zecala elinzima ukuze wenze izandla zakho zikhululeke
I-5.bpa yasimahla& Kulula ukucoca: I-liner yeendlela ezipholileyo ezithambileyo ezenziwe kwi-BPA yasimahla, umgangatho ophezulu. Kwaye ibhegi epholileyo ilula ukuyicoca, sebenzisa nje iitawuli zephepha ukuze ucoceke ngokulula kwaye ivumba ayizithanga, ukuthintela ukubumba kunye nokuthintela ukubumba.